ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကွန်ပြူတာကို လန့်သူများ”
Local train approaching the same station? 
Your daughter is very cute. :)
ကျမရဲ့ ဦးရီးတော်လဲ တူတူပဲ။ ကွန်ပျူတာကို တော်ရုံတန်ရုံ မသုံးဘူး။ အလုပ်ထဲမှာ စာရိုက်စရာရှိလဲ သူ့အတွင်းရေးမှူးကို ခိုင်းတယ်။ အိမ်မှာဆို အီးမေးလ်ကအစ ကျမပဲ ရိုက်ပေးရတယ်။ ဘေလ်ဆောင်တာ ငွေလွှဲတာလဲ တန်းစီပြီး လုပ်တုန်းပဲ။ သူကတော့ အင်တာနက်က လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲပေါ့။ ကိုပေါပြောသလို ကွန်ပျူတာကို လန့်တာပဲ နေမှာ။
သူတို့နဲ့ယှဉ်ရင် ကျမတို့ ခေတ်က ပိုသာလာကြပါပြီ။ ဒီလိုပဲ ကျမတို့နဲ့ ယှဉ်ရင် နောက်လူငယ်တွေက ပိုပြီး သာလာကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ... ကိုပေါသမီးတို့လို နောက်မျိုးဆက်သစ် ကလေးတွေရဲ့ ခေတ်မှာတော့ ... အစစ အရာအရာ အသားကျနိုင်ကောင်းမယ် ထင်ပါရဲ့။
ကိုပေါပြောမှ ကျနော့်ကျောင်းတုံးကအဖြစ်ကို သတိရတယ်..အဲဒီ C Language . ပရိုဂရမ်ထဲမှာ ပါတဲ့ Enter ရိုက်ဖို့ ရေးထားတာကိုတောင် ဘာမှန်းမသိပဲ ပရိုဂရမ်နဲ့ ရောကျက်ပြီးကျောင်းပြီးသွားတယ်.. တော်တော်ကြာလို့Auto CAD လေးဘာလေးသွားသင်မှ အဲဒီ Enter ဆိုတာကို နည်းနည်းသဘောလာပေါက်တယ်.. ကျနော်ထက်ဆိုးတာက ၅တန်း EP က ဆရာအသစ်တဦးပါ.. တနေ့ ကျောင်းမှာ PLC Unit တခုရောက်လာပါတယ်.. မြင်ဖူးအောင် ကျောင်းသားတွေကို ပြမယ်ဆိုလို့LAB အခန်းမှာ တဖွဲ့ ဆီသွားကြည့်ရပါတယ်.. ဆရာက ကွန်ပျူတာနဲ့အဲဒီ PLC Unit နဲ့ တွဲ RAN ပြီးနည်းနည်းပါးပါး ရှင်းပြပါတယ်.. ကျောင်းသားတွေက မေးချင်တာမေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆရာက ပြီးပြီ..ဆိုပြီး ကွန်ပျူတာကို မီးခလုတ်ကနေ တိုက်ရိုက်ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်.. အဲဒါကို ကျနော်အပါအ၀င် အင်ဂျင်နီယာလောင်း ကျောင်းသားကြီး တော်တော်များက ဆရာဘာမှ အမှားလုပ်လိုက်တယ်လို့ သိပုံမရကြပါဘူး.. ကွန်ပျူတာနည်းနည်းပါးပါး အပြင်မှာ သင်ဖူးတဲ့ ကျနော်သူငယ်ချင်းက ကွန်ပျူတာကို အဲဒီလိုမပိတ်ရဘူးလို့ ကျနော်တို့ ကို တိုးတိုးလေးပြောတာ ကျနော်တို့ကောင်းကောင်းနားမလည်ခဲ့ပါဘူး.. နောက်မှ Y.I.T က LAB မှာ အဲဒီအချိန်တွေတုံးက Hardisk တွေ ခဏခဏ ကြွတာ.. ဒါကြောင့်လားလို့ဆပ်ဆက် တွေးနေမိပါတယ်.. [အခုရော ကွန်ပျူတာကိုိ မီးခလုတ်ကနေပဲ ပိတ်နေကြတုံးပဲလားမသိပါဘူး :-) ]
လူဟာ ဘယ်အရာမဆို ထိတွေ့ခွင့်ရရင်၊ ကျင့်သုံးခွင့်ရရင် မကြာခင်မှာပဲ အသားတကျ ဖြစ်သွားတတ်တာပဲဆိုတဲ့ အချက်ကို သွားတွေးမိတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ သေသေချာချာ ကျင့်သုံးကြည့်ဖို့ အခွင့်မသာသေးလို့ပါ။ စတင်ကျင့်သုံးခွင့်ရတာနဲ့ မကြာခင်မှာဘဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ အသားကျသွားမှာ အမှန်ပါပဲ။
I agree! That's why I saw crazy people when they talked about discipline Democracy. There is only one Democracy and human rights. No Royal human rights or civilian human rights!!
ကွန်ပြူတာကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်သေသွားသူ ရှိတယ် ဘမာပြည်မှာ
ရွေတောင်ချည်မျှင် အထည်နှင့်အချောကိုင်စက်ရုံကခင်ဗျ ဒေါ်မြမြဝင်းBE (Chemical) .ဖြစ်ပုံကတရုပ်ကနေ အထည်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို ကွန်ပြူတာ စကင်နာ ဖလင်ထုတ်တဲ့စက် အစုံအလင်နဲ့ ပြည်တွင်းက အောင်သောင်းနဲ့အကြောင်းသင့်သူကစက်ရုံကို သွင်းတယ် ပြီးတော့အဲဒီစက်တွေထိန်းသိမ်းဖို့ QC ဌာနက အဲဒီအမျိုးသမီးကိုတာဝန်ပေးတယ် ပြီးတော့စက်ရုံမှူးဦးစိုးလှိုင် (ဒုဗိုလ်မှုးဟောင်း)က ခပ်တည်တည်နဲ့ သိန်းတစ်ထောင်ကျော်ပေးရသော ထိုကွန်ပျူတာပျက်လျင် ခုံရုံးဖွဲ့စစ်မည် ဟု အမှာစကားပြောကြားပါလေရော ဖြစ်ပုံက ပရင်တာ ထုတ်မ၇တာပါ ဆော့ဖ်ဝဲကို ဘယ်သူကယောင်မှားပြီး ဖျက်လိုက်တယ်မသိ ပြန်တင်ရင်ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူကအစကတဲကရိုး၇ိုး ကြောက်ကလဲကြောက်တတ် ဘာမှလဲ ကွန်ပြူတာအကြောင်းမသိတော့ ခုံရုံးကိုကြောက်တာနဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲက ဓါတုပစည်းတွေသောက်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့၇ပါတယ်
အဓိကတာဝန်ရှိသူ က စက်၇ုံမှုးစိုးလှိုင်ပါ နကန်းတစ်လုံးမှမသိဘဲ ပြောချင်ရာပြော အမိန့်ပေးချင်ရာပေး အရူးဘုံမြှောက် သလို ကောင်တွေ
ကြောင့် ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆုံးရှုံးရတယ် ခလေးတွေအမိမဲ့ ဖြစ်ရတယ်
အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ (ပင်ကိုယ်အသံ)ပြောမိလို့ ဘေးက
ကျမ မနှစ်ကအလုပ်တခုသွားလျှောက်တော့ သူတို့က လက်တွေ့စစ်တဲ့အခါ ကွန်ပြူတာ ဘယ်လောက်သုံးနိုင်သလဲလို့ ၁နာရီမေးခွန်းထဲ့မေးတယ်။ အမှန်က မြန်မာပြည်မှာတုံးကလဲ ကွန်ပြူတာသင်တန်းကို အခြေခံ အဆင့်လောက်သာ၃လ တက်ခဲ့ဘူးတာ..
ရုံးမှာတုံးကလဲ ဒါရိုက်တာအခန်းထဲမှာပဲ ကွန်ပြူတာသုံးတာ ဆိုတော့ရင်းနှီးမှု့က မရှိဘူးပေါ့။
ဒီရောက်တော့လဲ မိတ်ဆွေတယောက်က မော်ဒယ်အသစ်လဲလို့ ပေးထားတဲ့ စက်ကလေးကိုပဲ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ကိုယ်သိပြီးသားအခြေခံပဲ လှည့်ပတ်သုံ့းတယ်၊ စူးစူးစမ်းစမ်းနဲ့ ဘာကိုမှ အထွန့်တက်မသုံးဘူး။
အသက်သာအသေခံမယ် စက်တော့အပျက်မခံဘူးပေါ့လေ။ အလုပ်စာမေးပွဲမှာက ပရင့်ထုတ်တဲ့စက်တွေ အများကြီးဆိုတော့ ပရင့်ဘောက်စ်ကျလာရင် ကိုယ်ထုတ်မဲ့စက်ရဲ့ နံပါတ်ရိုက်ထဲ့ရတာမသိခဲ့ဘူး။
သင်တန်းမှာသင်ခဲ့သလိုပဲ ပရင့်ပုံလေးကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ကိုယ့်စာအထွက်စောင့်ကြည့်နေတာ
စာမထွက်ပဲ ဘောက်စ်ပဲကျကျလာတော့ လူကတုံတုံယင်ယင် ဖြစ်နေပြီ၊ သူများတွေကတော့အခန်းထောင့်က စက်မှာတရွက်ပြီးတရွက် သွားပြီးဆွဲဆွဲ ထွက်လာလိုက်ကြတာ..ဖြူးလို့ပဲ၊ ဆရာမကလဲ ဖြေတဲ့သူတွေထဲမှာ ကိုယ့်ပဲစောင့်ကြည့်နေတာ၊ ကျမလဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ လုပ်မီလုပ်ရာ အံကြိတ်ပြီး ကျလာသမျှဘောက်စ်ပိတ်လိုက် ပရင့်ပုံကို နှိပ်လိုက်လုပ်နေတာ နောက်ဆုံးဆရာမက ဖြေဆိုခြင်းကို ကျေးဇူးပြုပြီးရပ်လိုက်ပါတဲ့၊ နောက် ဘေးကပ်ရက်က အတွင်းေ၇းမှူးအခန်းထဲ ၀င်သွားပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ သူ့လက်ထဲမှာ ကျမအဖြေလွှာတွေ စာအုပ်တအုပ် ထုတ်လို့ရလောက်တယ်။ ဆ၇ာမက အချိန်မပြည့်သေးပဲ ၀မ်းနည်းပါတယ် ထပ်ကြီုးစားဖို့
အိမ်မှာလဲ လေ့ကျင့်လို့ရ၊ စာမေးပွဲခန်းထဲမှာလဲ သွေးအေးအေးနဲ့ ဘောက်စ်ထဲကစာကိုဖတ်ရင်ရနိုင်သေးရဲ့နဲ့. လှေနံဒါးထစ် ကိုယ်သင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ပရင့်ပုံလေးပဲ အံကြိတ်ပြီးနှိပ်မိလို့ ရခဲ့တဲ့
အကျိူးပေါ့ ကိုပေါရေ။ ဘ၀မှအမှတ်အရဆုံးနေ့ပေါ့။
Conclusion ကိုကြိုက်တယ်။ :)
စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီကိုအရင်းသွားရအုံးမှာ နော်... ကိုပေါလျောက်ပီးပြောမနေနဲ့... အဘတို့ကရေ ရှည်ကိုကြည့်ပီး တွေးခေါ်ထားတာ.. ချက်ခြင်းကြီး ဒီမိုကရေစီဆိုတာပေးလို့မဖြစ်ဘူး.. သိလား.. ဒီမိုကရေစီဆိုတာစည်းကမ်းမရှိလို့ ချက်ခြင်းကြီးပေးလိုက်ရင်ကွန်ပြူတာ ကြောက်သလိုကြောက်မှာစိုးလို့..စည်းကမ်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအရင်းပေးအုံးမှာ..